UkuBhanisa kwiZikolo: Ukufeza iSitatimende sakho seMishini
Isikolo ngasinye esizimeleyo sinesitatimende sobume, nto leyo into eyenziwa yiinkampani, amaziko emfundo kunye namaziko amashishini ukuba athethe oko akwenzayo nokuba kutheni benza. Isitatimende esisisigxina somsebenzi simfutshane, kulula ukukhumbula, kwaye idibanisa iinkonzo okanye iimveliso ezibonelelwa ngabaphathi bazo. Izikolo ezininzi zizabalazela ukudala isitatimende esinamandla sokubamba iqela kwaye zikhangele izikhokelo malunga nendlela yokulungisa lo myalezo obalulekileyo.
Nakhu okufuneka ukwazi malunga nokufezekisa isitatimende semfundiso yesikolo sakho, esinokukunceda ukuba ukhulise umyalezo oqinileyo wokuthengisa abaphulaphuli bakho baya kukukhumbula.
Yiyiphi iSitatimende soMsebenzi?
Isikolo ngasinye esizimeleyo sinesitatimende semfundiso, kodwa akusiyo yonke indawo yoluntu esiyaziyo kwaye iphila. Enyanisweni, abantu abaninzi abaqinisekanga nokuba yintoni isitatimende semishini esifanelekileyo esikolweni sabo. Isitatimende semishini kufuneka sibe ngumyalezo ochaza oko esikolweni sakho. Akufanele kube yinkcazo eninzi yokwenza isikolo sakho, i-demographics, umzimba wezemfundo kunye nezibonelelo.
Kufuneka kube nini kwiSitatimende soMsebenzi esikolweni sam?
Unokufumana iimbono ezahlukileyo, kodwa abaninzi bayavuma ukuba isitatimende sakho semishini sifanele sibe mfutshane. Abanye bathi umhlathi kufanele ube ngumlinganiselo ogqithiseleyo womyalezo, kodwa ukuba ngokwenene ufuna abantu bakhumbule baze bavumelane nomsebenzi wesikolo sakho, isigwebo okanye ezimbini zifanelekile.
Yintoni efunekayo kwiSitatimende seMfundiso yesikolo?
Ukuba unemizuzwana eyi-10 ukuthetha oko esikolweni sakho, ungathini? Oku kusebenze kakhulu xa udala okanye uhlalutya inkulumo yakho yemfundiso. Kufuneka ukuba kubekho esikolweni sakho, kwaye kufuneka ukuba ubonise ngokucacileyo oko wenzayo njengesikhungo semfundo, injongo yakho.
Oku akuthethi ukucacisa zonke iinkcukacha ezicwangcisiweyo zesicwangciso sezenzo zesikolo sakho, icebo lesicwangciso-nkqubo, okanye uvavanyo lokuzifundela . Oku kuthetha nje ukuba kufuneka uxelele uluntu olungakumbi ukuba zeziphi iinjongo zakho eziphambili. Nangona kunjalo, isitatimende sakho semishini akufanele sibe sisisigxina ukuba umfundi akakwazi nokuba luhlobo luni loshishino. Njengesikhungo semfundo, into ethile malunga nomsebenzi wakho kufuneka ihambelane nemfundo. Nangona kubalulekile ukucinga malunga nokuba yintoni isitatimende sakho semishini esithethayo esikolweni sakho, kubaluleke ngokufanayo ukuqonda ukuba njengezikolo ezizimeleyo, ngandlela-thile sonke sinomsebenzi ofanayo: ukufundisa abantwana. Ngoko sebenzisa isitatimende sakho semishini ukuba uthathe le ngcamango isinyathelo esilandelayo uze ufumene indlela ohlula ngayo kwiontanga kunye nabaphiswano.
Kufuneka kube lixesha elingakanani ixesha lokuthumela umyalezo?
Kufuneka ujonge ukuphuhlisa umyalezo ongenasiphelo, njengoko kukho umyalezo onokumelana nokuvavanywa kwexesha - amashumi eminyaka okanye ngaphezulu. Oko akuthethi ukuba isitatimende sakho semishini asinakuze sitshintshe; ukuba kukho iinguqu ezibalulekileyo zentlangano, isitatimende esitsha semishini sinokufaneleka. Kodwa, kufuneka ujonge ukuphuhlisa isitatimende ngokubanzi malunga nefilosofi engabophelanga isikolo sakho kwiprogram enomdla okanye ixesha lokufunda.
Umzekelo wenjongo yeprogram esebenza kakuhle ingaba yintetho yesigqeba yesikolo echaza ukuzibophezela kwiMetessori Method, imodeli yemfundo evivinywayo. Oku kuyimfuneko eyamkelekileyo yesikolo. Umzekelo wentshumayelo yeprogram engafanelekanga isikolo esikhulisa isitatimende semishini esibophelela isikolo kwiindlela zokufundisa ngekhulu lama-21 ezazisetyenziswa kwiminyaka yokuqala yama-2000. Le nkcazo yomsebenzi ihlaziya umgangatho wesikolo ekupheleni kwekhulu lama-21, kwaye iindlela zokufundisa zitshintshile kakade ukususela ngonyaka ka-2000 kwaye ziya kuqhubeka zenza njalo.
Ngubani na omele athuthukise isitatimende semishini?
Ikomiti kufuneka iqulunqwe ukudala kunye / okanye ukuvavanya isitatimende sakho semishini esimele siqulethwe ngabantu ababazi kakuhle isikolo namhlanje, kwaye baqhelana nezicwangciso zayo ezicwangcisekileyo zexesha elizayo, kwaye baqonde iimeko zesitatimende esisisigxina se-mission.
Into ehlala ididekayo kukuba iikomiti ezininzi ezithatha isigqibo sokuba isitatimende somsebenzi wesikolo akufanele sichaze i-branding kunye neengcali zokuthumela imiyalezo ezinokunika izikhokelo ezifanelekileyo ukuqinisekisa ukuba isikolo simele kakuhle.
Ndiyivavanya njani isitatimende se-school statement?
Ngaba ichaza ngokuchanekileyo isikolo sakho?
Ngaba ingachaza ngokuchanekileyo isikolo sakho esi-10 ukususela ngoku?
Ngaba kulula kwaye kulula ukuyiqonda?
Ingaba uluntu lwakho, kubandakanywa ubuchule kunye nabasebenzi, abafundi kunye nabazali, bayazi i-mission statement entliziyweni?
Ukuba uphendula impendulo kwaneyiphi yale mibuzo, unokufuna ukuvavanya amandla okuthetha kwakho. Isitatimende esisisigxina se-mission siyinxalenye ebalulekileyo ekuphuhliseni isicwangciso sokuthengisa esikolweni sakho. Cinga ukuba isikolo sakho sinesitatimende esihle semishini? Yabelana nami nge Twitter kunye ne-Facebook.
Iimpawu ezivela 'kwixesha lokubulala'
Imifanekiso yama-Mustangs Ngonyaka
10 Amazwi ngoAdolf Hitler
Ukukhangela iiHolo eziMnyama kwiiGalaxi ezikude
Yintoni eyenzekayo kumKristu Emva kokufa?
Iimpawu ezininzi ezifanelekileyo Unokuze Ufunde IsiGlasi saseFrentshi
Indlela yokulungiselela kunye neeklasi zeGED kwi-Intanethi
Izihloko zesicwangciso seSifundo seSikethi